राजनीतिक वर्गको लाजमर्दो अकर्मण्यता - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- डा. गोविन्द केसी
अब मेडिकल शिक्षा मात्र नभएर समग्र स्वास्थ्यसेवा सुधार तथा राजनीतिज्ञहरूको भ्रष्टाचार र माफियागिरी विरुद्ध पनि लडिनेछ ।
फाल्गुन ५, २०७३-सचेत नागरिकहरू, स्वतन्त्र मिडिया र सक्षम न्यायपालिका लोकतन्त्रका लागि नभई नहुने पक्ष हुन् । तर यी हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीतिक वर्ग व्यवस्थालाई असफल पार्न र आम नागरिकलाई निरन्तर यातना दिन उद्यत छ भने समाज र देशले बाटो बिराउँछ । अगाडिबाट समाजलाई डोर्‍याउनुपर्ने मानिसहरू भविष्यको बाटो के हो भन्ने नै भुलेर राज्यस्रोतको दोहन गर्दै आफूलाई धनी बनाउनमा लिप्त भएपछि जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ, अहिले हामी त्यसैमा छौं । जुनबेला नेपालका राजनीतिक दलहरू देशमा कायम समानान्तर सत्ताको भयले बोली फुटाउन नसक्ने अवस्थामा थिए, त्यो बेला नागरिकहरू सडकमा उत्रेर आवाज उठाए । उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले झैं कोरा नारा लगाउने र रेलिङ भाँच्ने काम गरेनन् । समानान्तर राज्यले कसरी समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाएर व्यवस्थालाई असफल बनाउँदैछ भन्ने फेहरिस्त बाहिर ल्याए ।
›डा. गोविन्द केसी
अश्लील सन्देश पठाउने पक्राउ ›